Odeessa- Kaaba Shaggar Darraan Kan Amaaraadha jechuun .. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOdeessa- Kaaba Shaggar Darraan Kan Amaaraadha jechuun ..
Odeessa- Kaaba Shaggar: Darraan Kan Amaaraadha jechuun hidhatoonni alaabaa “Lumuxxii” Darraa weerarani
Qabsoo Oromoo geggeessu maaliif deemee deemee bakka ga’uu hanqata. Oromoo kaleessas harrras itti dhiigaa fi Ilmaan isaa qaqqaalii itti dhabaa jira.
OMN: Oduu IJOO ONK 24, 2020
Haalli Magaalaa Naqamtee keessa jiru nageenyi boorahuun wal qabatee hedduu yaaddessaadha jechuun jiraattoonni dubbatan
Jiraattota agaalaa Naqamtee keessaa kan yaada isaanii OMNiif himan akka jedhanitti, Waraanni gara jabeenyummaa hamaa qabaachuu irraan kan ka’e,ijoollee ajjeesanii reefka isaanii albeedhaan iddoo hedduu cicciruun maatiin sadarkaa eenyummaa ijoollee kanaatuu addaan baasuuf rakkachaa jiran irra jiraachuu dubbatan.
Jiraattuun magaalaa Naqamtee takka akka OMNitti himtetti, Nama nagayaa mana isaatii gad baasanii erga ajjeesaniin booda garee Abbaa torbee ajjeefne jedhanii dhaadachuun murni taayitaa humnaan dhuunfatee jiru kun hangam Ummata Oromoo diinomfatee akka jiru nutti agarsiiseera jetti.
Dargaggoonni kunneen erga ajjeefamaniin booda reeffa isaanii maatiin akka hin kaafneef loltoonni sirnichaa ittisaa turaniiru.boodarra garuu dhiibbaa ummanni gochaa tureen jaarsonni biyyaa manguddummaan gidduu seenuun maatii reeffa fudhatee guyyaa kana sirni awwaalcha dargaggoota kanneenii raawwatamaa akka jiru maddeen gabaasaniiru.
Shamarreen OMN Naqamteerraa dubbise dhaamsa isiitiin,duuti manattu nurraa dhaabbachaa waan hin jirreef Oromoon kallattii hundaan tokkummaadhaan ka’ee qabsoo finiinsuun gabrummaa tana dhuma itti gochuu qaba jettee jirti.
Harargee Lixaa Aanaa Daaroo labuu magaalaa Machaaraatti Poolisoonni addaa Oromiyaa guyyaa kaleessaa dargaggoo tokko gar-malee reebuun akka ajjeese himame.
Namni ajjeefame kun Jamaal Aadam Yuusuf ykn maqaa masoo Caalaa jedhamuun kan beekamu yoo ta’u,Guyyaa kaleessaa Poolisoonni nama kana gar-malee erga reebanii booda gara Mana hidhaa Magaalaa Miicataatti geessanii turan jedhameera.
Mana hidhaa keessatti wayta Dhukkubni itti hammaatu gara Hospitaala Galamsootti dabarsuun waldhaansi taasifamaaf osoo jiru reebicha irra gahe irraa dandamachuu dadhabuun guyyama kaleessaa du’aan addunyaa kana irraa darbee jira.
Caalaan Miseensa WBO Duraanii yoo tahu, gaafa H/Duree ABO Obbo Dawud ibsaa Eritiraa irraa galan, Caalaanis Hayyuu Duree fi WBO Wajjiin Qabsoo karaa Nagayaatiin gaggeessuuf gara qe’ee dhalootaa isaatti galee nagaan jiraachaa ture dha jedhameera.
Ajjeechaan Ilmaan Oromoo irratti Humnoota Addaa Poolisii Oromiyaatiin magaalaa Naqamtetti guyyaa kaleessaa raawwatameen Gadda guddatu nutti dhagayame jedhan Qeerroon godina Baalee Aanaa Gindhiir irraa yaada OMN’f laataniin. Nuti Qeerroon baalee duguuggaa sanyii ummata Oromoo irratti jumlaan Murna humnaan biyya bulchaa jiruun gaggeeffamaa jiru kana cimsinee balaaleffanna jedhaniiru. Qeerrowwan kunneen dhaamsa isaaniitiin gocha gara jabeenyaa saba keenya irratti raawwatamaa jiru kana jalaa bahuu kan dandeenyu Oromoon kallattii hundaan yoo qabsoo finiinse qofaadha jedhan. Dhuma irratti Qeerroon Baalee maatii ijiolleen isaanii haala suukkanneessaan jalaa ajjeefamaniif obsaaf jajjabinna hawwina jedhaniiru.
Mootummaan humnaan biyya bulchaa jiru sababa adda addaa uumuun badii tokkoon maletti sabboontota oromoo ajjeesuun akkuma itti fufetti jira. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa Godina Harargee Bahaa magaalaa Awaday ganda Imaar bakka keellaa jedhamutti shufeera konkolaata kan ta’e Nama Fahamii Abdi jedhamu halkan walakkaa sa’aatii 7:00 irratti Milishaa gandaatiin akka ajjeefame jiraataan magaalaa Awwadaay tokko bilbilaan OMN’tti himeera.
Akka maddi keenya kun jedhutti, dargaggoo Fahamiin Jimaa fe’atee magaalaa Awwadaayirraa ka’ee gara Dirre Dhawaa osoo imalutti jiru milishaan gandaa karatti dhaabsisuun qaraxa humnaa olii kan gaafatan yoo ta’u, sababa inni maaliif humnaa ol na kafalchiiftu jedhee gaafateef qofa rasaasaan dhahani ajjeesan jedha maddi keenya kan Awwaday.
[SQ, Onkoloolessa 24,2020] Faamii Abdii jedhama. Konkolaachisaadha. Eda Awwadaay ganda Imaar jedhamu keessatti rasaasa lamaan ajjeefame jedhan
DW International Oduu Afaan Oromoo. October 23/2020